‘सरौतो’ का लागि दुई वर्ष मार्सल आर्ट सिकेँ: सुमी मोक्तान - Nepal Insider
कारागारमा रेशम र महरा, कोहि कविता वाचन गर्दै कोहि टोलाउँदै ! यस्तो छ कविता
Home/समाचार/‘सरौतो’ का लागि दुई वर्ष मार्सल आर्ट सिकेँ: सुमी मोक्तान
काठमाडौं – नायिका सुमी मोक्तान फिल्म ‘सरौतो’ मार्फत दर्शकमाझ आउँदैछिन् । हरि हुमागाईंले निर्देशन गरेको उक्त फिल्मको रिलिजअघि राम्रै चर्चा छ । फिल्ममा सुमीसँगै सन्नी सिंह, आमिर गौतम, विजय लामा लगायतका कलाकारको शीर्ष भूमिका छ ।आउँदो मंसिर १३ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने यो फिल्मको ट्रेलरले राम्रै चर्चा पाएको छ । फिल्ममा सुमीलाई एक्सन अवतारमा देख्न पाइनेछ ।
एक्सन अवतार वास्तविक जस्तो होस् भने सुमीले झण्डै २ वर्ष मार्सल आर्ट नै सिकेकी थिइन् । जबकि, नेपालमा कलाकारले आफ्नो चरित्रका लागि खासै कसरत गर्दैनन् ।खबरहबसँगको कुराकानीमा नायिका सुमीले भनिन्, ‘चुनौतीविना जीवनमा के नै रमाइलो छ र भन्ने लाग्छ, मैले सधै एउटै काम नहोस्, केही फरक होस् भनेर मार्सल आर्ट सिकेकी हुँ ।’
सुमीले ‘सरौतो’ मा क्यारेक्टरलाई न्याय दिनका लागि सांकेतिक भाषा समेत सिकेको बताइन् । ‘मैले यो फिल्मकै लागि भनेर सांकेतिक भाषा पनि सिकेँ र दुई वर्ष मार्सल आर्ट सिकेँ,’ उनले भनिन् ।
साथै उनले फिल्ममा सबैले गरेको कामको तारिफ गर्दै एक्सन फिल्ममा यो तहको फिल्म कमै गर्नै बनेको समेत दाबी गरिन् । फिल्ममा उनले कान नसुन्ने एक युवतीको भूमिका निभाएकी छिन् । ‘सरौतो’ मा बदलाको कथा छ ।
नारी कलाकारले यसअघि एक्सन फिल्ममा अभिनय गरे पनि ती नायिकाहरु खासै सफल बन्न नसकेको इतिहास छ । पछिल्लो समय ‘जाइरा’ मा नम्रतालाई एक्सन भूमिकामा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, फिल्मले व्यावसायिक सफलता हात पार्न सकेन ।
के तपाईं एक्सन लेडीका रुपमा स्थापित हुनुहोला त? भन्ने खबरहबको प्रश्नमा सुमीले भनिन्, ‘हुन्छु होला, फेरि फिल्ममा एक्लैले गरेर हुने पनि होइन, फिल्म नै राम्रो हुनुपर्छ, र ‘सरौतो’ साँच्चिकै राम्रो बनेको छ ।’
विश्वकपलाई ध्यानमा राख्दै कतारले ल्यायो पहिलो मेट्रो रेल ,तस्बिरमा हेर्नुहोस् चकित पर्नुहुनेछ (तस्बिर सहित)
रवि लामिछानेको मु*द्दामा उच्च अदालतले दियो यस्तो आदेश
भाग्य पनि कस्तो–कस्तो ? भएका तीन सन्तान नदीले बगाए*पछि शो**कमा दम्पती !
ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ?
अस्ट्रेलियामा बस्दै आएकी नेपाली चेली अनुष्काले जितिन मिस नेपाल २०१९…